Korea Avaratra: Mampatahotra an’i Kim Jong Ve Ny Famonoana Natao An’i Gaddafi? · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraLee Hyun Min
Voadika ny 23 Novambra 2011 10:00 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, Español, Shqip, বাংলা, Svenska, عربي, македонски, English
Koreana Tavaratra nitsoaka ny fireneny lasa mpanao gazety manoratra ao amin'ny bilaogy antsoina hoe North Korea RT (Real Talk) i Joo Sung. Teraka tao Korea Avaratra Andriamatoa Joo ary nahavita fianarana ambony tao amin'ny oniversite Kim Il-sung, iray amin'ireo oniversite manan-danja indrindra ao Korea Avaratra. Niala tao an-tanindrazany izy ny taona 1998 ary nahazo ny fizakana ny zo maha-olom-pirenena Koreana Atsimo efa-taona taty aoriana. Mamoaka lahatsoratra matetika mitantara ny fiainany amin'ny antsipirihany tao Korea Avaratra izy mba hampahafantarana bebe kokoa ny zava-misy marina ao amin'ny fanjakana mitoka-monina.
Ity lahatsoratra ity dia tsikera nataony tamin'ireo tati-baovao marobe nanaparitaka fa mihorohoro i Kim Jong-il, mpanao didy jadona ao Korea Avaratra raha nandre ny fionganan'i Kolonely Gaddafi, filoham-pirenena Lybiana teo aloha. Tsy faly fa anisan'ireo mpanao didy jadona maherisetra fantan-daza manerantany, mitovy avokoa ny mombamomba azy ireo ary azo heverina tsara lavitra koa fa mpinamana izy ireo.
Sarin'i Gaddafi sy Kim Jong-il, mpanao didy jadona roa fantan-daza manerantany, Nalefa tao amin'ny bilaogin'i Joo, nahazoana alalana.
Taorian'ny fionganan'i Gaddafi, samy namoaka lahatsoratra ny fampahalalam-baovao isan-tsokajiny nanambara fa hihorohoro manoloana ny vaovao i Kim Jong-il. Saingy TSY izany kosa no eritreretiko. Hihorohoro manoloana ny vaovao tokoa ve izy? Toa tsy hisy izany. Raha ny tena marina, toa te hivazivazy ny amin'i Gadahafi fotsiny i Kim noho ny fahavinirany ary mbola mananihany ihany na dia izany aza [vazivazy]..
Amiko manokana, ny fidiran'ny OTAN an-tsehatra no nitondra ny fahafatesan'i Gaddafi, fa tsy ny revolisiona anatiny.
Ny momba an'i Kim manokana, sarotsarotra kokoa, angamba sarotra avo zato eny ho an'ny revolision'ny olom-pirenena no hijoro hanao fiokona ao amin'ny firenena Koreana Avaratra. Na dia mbola tsy nataony mihitsy aza anefa izany, fantatra fa tsy hitsitsy avy hatrany ireo tafika mankato ny fitondrana handrava mora foana ny fiokona, mialoha ny fiparitahan'ny vaovao manerantany mihitsy aza.
Fantatry Kim tsara fa tsy mora ho an'ny fahefana avy any ivelany ny miditra amin'ny raharaha anatiny ao Korea Avaratra: manana fitaovam-piadiana nokleary izy, manana tafika roa tapitrisa. Ary tohanan'i Shina ihany koa , ary tsy manana solintany kosa i Korea Avaratra… Iza no sahy hanafika an'i Korea Avaratra raha toa ka tsy hitondra afatsy korontana izany? Araka izany, tsy misy antony na iray aza tokony hampitahotra azy manoloana ny vaovao farany ao Libya.
Na izany aza, tsy isalasalana, fa ho sahirana mafy Andriamatoa Kim manoloana izay mety hiseho. Mety efa nandray fepetra amin'ny fandaminana ireo mpitandro ny filaminana izy, ny fanamafisana ny fanaraha-maso eny amin'ny sisintany, fanakanana ny fampahalalam-baovao rehetra avy any Moyen-Orient ary fanamafisana ny antoko politikany mba hisorohana izay mety ho fanonganam-panjakana, sns.
Ny tena mampanahy an'i Kim Jong dia ny fieritreretana raha mbola mahafehy ny fitondrana ihany ny zanany lahy mpandimby azy, Kim Jung-un, azy na tsia, rahatrizay maty izy. Raha ny fijeriko azy dia ratsiratsy ihany ny toe-draharaha. Raha mbola mitohy ny ataony [mpandimby], dia tsy haharitra roa taona akory ny fitondrana.
Ny hany azoko vinavinaina dia tranga roa ihany no mety hampirodana ny fitondrana Koreana Tavaratra.
Tranga voalohany: Mpanao kolikoly loatra ny olom-pirenena sy ny manampahefana sady tsy miraharaha ny andraikiny ka lò tanteraka ny fitondrana dia mirodana [ho azy raha mbola manohy ny fanaony izy ireo]. Saingy mbola ho elaela ihany izany mazava loatra. Ny fitondrana lò, na dia hoe anarany fotsiny aza, dia mbola afa-mijoro raha tsy hoe misy fahefana hita maso hafa manongana azy.
Tranga faharoa: mety hipoaka tampoka ny fahatezeran'ny olotsotra na misy ady seza sy fahefana ao amin'ny samy mpitondra ao. Iza no mahalala? Mety hahita Koreana tavaratra tahaka an'i Ahn Jung-geun na Kim Jaw-kyu isika. [i Ahn Joong-gun dia ilay mpitolona Koreana izay namono ny Praiminisitra Japoney izay eo an-dalam-panjanahana an'i Korea Atsimo; Kim Jaw-kyu indray dia Jeneralin'ny Tafika Koreana Tatsimo namono ny filoha KOreana Tatsimo taloha, Park Chung-hee, izay tsarovana ho sady mahay mitarika no mpanao didy jadona.]
Fa ny zavamisy mivandravandra hafa ankoatra ireo tranga roa ireo dia izao: Antitra i Kim Jong-il ary ho mety faty atsy ho atsy. Ny fanontaniana sisa dia hoe ‘rahoviana’ fa ny antenaiko moa dia hoe ‘efa akaiky dia akaiky’.
Efa manomboka ny fanisana ny ora farany any Korea Avaratra.
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 ora izay